नेपाल आज | एनसेलबाट यसरी हुन्छ संवेदनशिल सूचनाको चुहावट, हुवावेबाट झन खतरा ! (श्रृंखला– १०)
शनिबार, ०३ पुष २०७८ गते प्रकाशित - नेपाल आज
मलेसियाली कम्पनी एक्जियाटा अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालनमा रहेको ‘एनसेल एक्जियाटा लिमिटेड’ले देशका संवेदनशील सूचना चुहावट गर्ने गरेको भन्दै वेलावखत आरोप खेप्दै आएको छ। तर, एनसेलले भने यो विषयलाई भ्रामक भन्दै पन्साउने गरेको छ।
यो कम्पनीमाथि सूचना चुहावट गरेको आरोप लाग्ने स्पष्ट दुई कारण छन् । पहिलो त यो कम्पनीमा उच्च तहका अधिकांश कर्मचारी विदेशी छन्। उनिहरु विशुद्ध रुपमा नेपालमा जागिर खान आएका हुन । जागिरको उदेश्य हो–पैसा। उनिहरुलाई नेपालको सुरक्षा संवेदनशिलता भन्दा पनि पैसासँग मतलव छ। त्यसैले आकर्षक अफर आयो भने उनिहरुले सूचना नचुहाउलान भन्ने अवस्था छैन। उनिहरुका लागि नेपालको अस्थित राजनीतिले पनि साथ दिएको छ।
सर्वसाधारणको जनजिविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको अनियन्त्रित वजार, खुलेआम कालोवजारी, गुणस्तरहिन सामानको विक्रि, भ्रटाचार, कुशासन समेत नियमन गर्न नसकेको नेपाल सरकारले प्राविधिक विषयमा एनसेललाई नियमन गर्छ र सूचना चुहावट रोक्छ भन्ने विषय आफैमा अन्यौलपूर्ण छ। त्यसमाथि देशको अस्थिर राजनीतिका कारण एनसेललाई कस्ले नियन्त्रण गर्ने र किन गर्ने भन्ने विषय पनि अहिलेको अहम सवाल हो।
दोस्रो, दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी ‘एनसेल’ चिनियाँ कम्पनी हुवावेको प्रविधिमा आधारित छ। अधिकांश पार्टपुर्जा, मेसिनरी समान हुवावे मार्फत जडान भएका छन् । दुरसञ्चार सेवा आफैमा प्राविधिक विषय भएकोले यसका हार्डवेयर सामान तथा सफ्वेयर अपडेट लगायका लागि एनसेलले हुवावेकै भर पर्नु पर्छ। त्यसैले पनि एनसेलमा हुवावेका प्राविधिक कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता छ।
चीनको हुवावे कम्पनी विश्वकै तेस्रो ठूलो मोबाइल कम्पनी हो । यो कम्पनी अत्यन्तै विवादित पनि छ। अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हुवावेलाई कालो सूचीमै राखेका थिए ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो मोबाइल उपकरण उत्पादन कम्पनी हुवावेको फोनबाट जासुसी भइरहेको अमेरिकाले आरोप लगाएको थियो ।
त्यतिमात्रै होईन, ०७५ सालताका अमेरिकाको अनुरोधमा हुवावेका संस्थापक रेन झेङफाई की छोरी तथा कम्पनीकी सीएफओ मेग वाङझु क्यानडामा पक्राउ समेत गरिएको थियो ।
अमेरिकी गुप्तचर अधिकारीले हुवावेका गतिविधिमाथि निगरानी गरिरहेको र उक्त कम्पनी राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले खतरापूर्ण रहेको बताउँदै आएका थिए । मेङका पिता एवं हुवावेका संस्थापक रेन झेङफाई चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका पूर्व इन्जिनियर समेत हुन्।
अहिले एनसेलका वरिष्ठ अधिकारी र हुवावेको मिलेमतोमा नेपालको सुरक्षा सम्वेदशितामाथि ठुलो षडयन्त्र भइरहेको स्रोतको दावी छ। एनसेल कर्मचारी र हुवावेले प्रविधि मार्फत नेपालमा जासुसी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।
एनसेलले नेपालका राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु जो एनसेलको प्रयोग गर्छन। उनिहरुको सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको वताईन्छ। खासगरी अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का समर्थक नेता तथा उच्चअधिकारी लक्षित जासुसीमा अहिले एनसेल प्रयोग भईरहेको स्र्रोतको दावी छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक प्रयास गर्दा एनसेलका आधिकारीक ब्यक्तिहरु सम्पर्कमा आउन चाहेका छैनन्। टेलिफोनमा प्रतिक्रिया दिन नमानेपछि कार्यालयमै जाँदा समेत उनिहरुको प्रतिक्रिया लिन सकिएको छैन। एनसेल र हुवावेको तर्फवाट कुनै प्रतिक्रिया आए अघिल्ला श्रृंखलामा समावेश गरिनेछ।
▶ एक्जियाटाले सोध्यो एनसेललाई स्पष्टिकरण, डन प्रवृत्ति उस्तै (श्रृंखला– ९)
▶ एनसेलमा कर्मचारीको आन्दोलन जारी, आधिकारीक स्रोत प्रयोग गर्न आग्रह (श्रृंखला– ८)
▶ जनता चुसेको र कर्मचारीलाई शोषण गरेको खुलासा गर्दा एनसेलले भन्यो– पित पत्रकारिताको पराकाष्ठा (श्रृंखला– ७)
▶ एनसेलद्वारा नेपाल आजलाई विज्ञापनको प्रलोभन, समाचार हटाउन दवाव (श्रृंखला– ६)
▶ एनसेलका कारण संवेदनशिल सूचना विदेशीको हातमा ! (श्रृंखला– ५)
▶ एनसेलका कर्मचारीको आन्दोलनमा श्रीवास्तवका भिजिलान्ते ! (श्रृंखला– ४)
▶ एनसेल आतंकः समाचार हटाउन दलाल मार्फत लगातार धम्की (श्रृंखला– ३)
▶ आन्दोलनको समाचार हटाउन एनसेल कर्मचारीको दवाव, नहटाए ठिक पार्ने धम्की (श्रृंखला– २)
▶ एनसेल कर्मचारीलाई बमले उडाईदिने श्रीवास्तवको धम्की (श्रृंखला– १)
एनसेल एक्जियाटा हुवावे